ओलीलाई माधव नेपालको प्रश्न– एक सय धेरै हुन्छ कि तीन सय धेरै हुन्छ ?
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घरमा विवाद भयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरमै आगो लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने– 'घरमा विवाद भयो भने घरका सबैलाई सिध्याइदिने, घरमा नै आगो लगाइदिने प्रवृत्तिको मान्छे हो, उहाँ । उहाँलाई राम्रो कुरा होइन अरिंगालको गोलो मन पर्छ, साइबर सेना मन पर्छ ।'
नेता नेपालले पार्टीका ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूकै पक्षमा रहेको समेत दाबी गरे ।
'१ सय धेरै हुन्छ कि ३ सय धेरै हुन्छ ?' केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको संख्यातर्फ इंगित गर्दै नेपालले भने, 'बहुमत आफ्नो पक्षमा छैन भने अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । संसद्मा १ सय ७३ मध्ये ९३ जना उहाँको विपक्षमा उभिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।'
उनले आफूहरूले ओलीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन नसकेको बताए ।
सरकारले गर्‍यो एकैपटक ५२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधि...